Qaybta 3aad= Xog-warranka Ninkii Fuliyey Dilkii Daldalaadda Ahaa Ee Saddaam Xuseen – Sannad Guurada 10aad ee Dilkii Saddaam Xuseen - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Qaybta 3aad= Xog-warranka Ninkii Fuliyey Dilkii Daldalaadda Ahaa Ee Saddaam Xuseen –...
Maydkii Madaxweynihii hore ee wadanka Ciraaq Saddaam Xuseen waxa aanu saarnay diyaarad Helicopter ah oo aanu kaga qaadnay barxadda weyn ee xabsiga Kaadimiya oo ahayd goob wax yar u jirta halkii aanu ku daldalay ee dilku ka dhacay waxaanan gaynay oo ay diyaaraddaasi u qaadday xarunta guud ee Ra’iisal wasaaraha wadanka Ciraaq Nuuri Al Maaliki, waa xafiiskiisa ku yaalla deegaanka Cagaaran (Mandaqatul Khadraa)”.
Markii uu intaa ka warramay Mawfiq Al-rabiici, La Taliyihii hore ee Amniga Qawmiga wadanka Ciraaq oo ka warramayay sida xaalku ahaa dilkii Saddaam Xuseen iyo sida ay falkaasi u fuliyeen, qaddar kooban ayuu aamusay isaga oo hoos u foorarsaday sidii qof wax xasuusanaya oo iska qiiraysiinaya. Mar kale ayuu hadalkiisii iyo sheekadii uu inoo waday ku soo noqonayaa waxaanu yidhi: “Markii aanu diyaaradda ku qaadnay Maydka Saddaam Xuseen oo aanu ku ridnay Kiish weyn oo dhammaantii dahaadhan waxa aanu ku dagnay barxadda hore ee qasriga Madaxtooyada (Qasrul Khadraa) oo uu ku yaallo Xafiiska Ra’iisal wasaaraha wadanka Ciraaq Nuuri Al Maaliki. Qaddar 10 daqiiqadood ah ayaanu diyaaradda ku sugnayn markii ay soo fadhiisatay oo aanaan ka degin. Mid ka mid ah ilaalada Qasriga Madaxtooyada iyo daaqamkii (Kooxdii) diyaaradda ayaa albaabka furay. Waxa aan arkayay qorraxda oo imika uun soo baxaysa. Waxaad garan kartaa markaa in aanu Saddaam Xuseen Daldallay subaxnimadii Hore ka hor intii aanay cadceedu soo bixin. Waa, ka hor intii aan la tukan salaadda subax, subaxnimadii Ciiddii Al Adxaa ee Sannadkii 2006.”.
(Wariyaha AFP) “Mawfiq Al Rabiici, waxa uu ahaa nin ugu yaraan saddex jeer la xidhay Cahdigii Saddaam Xuseen dalka ka talinayay. Mudadii aan waraysiga ka qaadaynay waxa uu muujinayay dareen degan oo uu iska dhigayay nin aad u dabacsan waxaase ka muuqanaysay in uu aad ugu faraxsanaa falka uu fuliyey ee uu masuulka kaga ahaa kooxdii daldashay Saddaam Xuseen. Waxa uu ahaa mid aan taasi qarsan”. Waakan Mawfiq Alrabiixi oo hadalkii ku soo noqday: “In aan ka mid noqdo kuwii daldalay waxa ay ii tahay sharaf. Waxa uu ahaa gacan ku dhiigle wax badan dadka dhibay. Waxa uu galay dambiyo aan la soo koobi karayn oo aad u badan. Waxa uu ahaa gacan ku dhiigle dad badan laayay oo arxan darran. Si kasta oo ay taasi u dhacday hadana waxa aan shaki lahayn dareenka qiirada leh ee ka dhashay falkaasi aanu ku fulinay ee daldalaadda ahaa. Geerida Saddaam waxa ay ahayd mid dareen badan xambaarsan” sidaa waxa yidhi Mawfiq Al Rabiici.
Mar kale Mawfiq Al Rabiici oo ka sii hadlaya sida uu u arko Saddaam Xuseen iyo in uu ka mid ahaa kooxdii dilka ku fulisay waliba uu isagu ahaa ninkii kooxdaasi hogaaminayay waxa uu yidhi: “Shakhsi caadi ah muu ahayn. Waxa uu ahaa nin dalka Ciraaq Galiyay dagaalo badan oo taariikhda galay oo dad badan oo reer Ciraaq ahi ku dhinteen. Dadkiisii ayuu u adeegsaday hub Kiimiko ah. Waxa aanu gacantiisa ku waynay kumanaan iyo kumanaan shacab ah oo reer Ciraaq ah oo xabaal wadareedyo lagu guray. Kumanaan kale ayaa la daldalay oo maalin walba qoorta loo dheerayn jiray. Waxaan aaminsanahay in dilkiisu ahaa fal taariikhi ah oo aad muhiim ugu ahaa shacabka wadanka Ciraaq iyo guud ahaan caalamul carab. Haa kama xumi, waxaan kuu sheegayaa in aanu gudanay waajin qaran oo dalka iyo dadkayagu nagu lahaa. Waxaan u hiilinay xaqa iyo dadkii la gumaaday ee aan waxba galabsan. Waxa uu ahaa nin arxan daran oo aan bani aadamnimada waxba ka aqoon. Waxa aanu gudanay waajib dalku nagu lahaa oo ay muhiim ahayd in aanu gudanaa”. ….La Soco